Indawo kaKathy, iKarimunjawa Room 2 - I-Airbnb
Indawo kaKathy, iKarimunjawa Room 2
UKathy Khety unezimvo eziyi-41 zezinye iindawo.
Indawo kaKathy yindlu entle engasemva esembindini weKarimunJawa.
Indlu engasemva inamagumbi okulala amahlanu eendwendwe kwindawo yokuhlala entle esetyenziswa ngumntu wonke enekhitshi elikhulu/igumbi lokutyela kunye negumbi lokuxhoma impahla elineflethi, iTV kunye ne-DVD player.
Amagumbi okulala amabini kula mahlanu anamagumbi okuhlambela angasese, amanye amagumbi okulala amathathu anegumbi lokuhlambela elinye.
Onke amagumbi okulala anomoya (akunyanzelekanga kumagumbi anegumbi lokuhlambela elisetyenziswa nangabanye abantu) kwaye iishawa zinamanzi ashushu - kumnandi!